बनाम गर्न सक्दैन | Martech Zone
मंगलवार, नोभेम्बर 30, 2010 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मैले धेरै समस्याहरूलाई अलग गरें जुन मैले व्यवसायमा पाएँ सक्दैन विरुद्ध हुदैन। मलाई काम गर्न मन पर्छ सक्दैन। मसँग काम गर्न घृणा गर्छु हुदैन.
सक्दैन धेरै चीजको अर्थ हुन सक्छ। सक्दैन स्रोत, नियम, शिक्षा वा अधिकार को कारण हुन सक्छ। जब तपाईं एक लक्ष्य हासिल गर्नुभएको छैन किनकि यो सक्दैन भइहाल्नुहोस्, तपाईं असफल हुनुभएको छैन ... केही बाटोमा भयो। एकचोटि तपाईंले रोडब्लॉक हटाउनुभयो भने, तपाईं सफल हुनुहुनेछ।
हुँदैन फरक छ। हुँदैन असफलतामा जान्छ। हुँदैन डर, अहंकार, गर्व, आलस्य वा मिस कम्युनिनेसनको कारण हुन्छ। हुँदैन यसको मतलब यो लक्ष्य सम्भव थियो, तर कोही बाटोमा भयो।
मेरो शुरुआती दिनहरुमा ब्यवस्थापकको रूपमा, मलाई सँधै प्रश्नको साथ चुनौती दिइन्थ्यो सक्दैन विरुद्ध हुदैन मेरो कर्मचारीहरु संग। मुद्दा एक हो कि होइन थाहा छैन सक्दैन वा हुदैन हामी सफल भएनौं किन भनेर पत्ता लगाउनको लागि मलाई कर्मचारीसँग गहिरो खन्न लगाइयो।
म प्राय: सफल हुन चाहने कर्मचारीहरू फेला पार्न छक्क परें, तर केही तेस्रो पार्टी हस्तक्षेपको कारणले गर्न सकेन। कहिलेकाँही म छक्क परें किनकि म थिएँ केही बाटोमा। एकचोटि हामीले हस्तक्षेप हटायौं, हामी जहिले जित््यौं।
जब गोल को कारण पूरा भएन हुदैन, प्रक्रिया धेरै फरक थियो। यी कर्मचारीहरू थिए जसलाई हटाउनु पर्ने हुन्थ्यो किनभने तिनीहरूले सफलताका लागि हस्तक्षेप र अवरोध थिए।
कथा कम्पनीहरु संग परिवर्तन हुँदैन। त्यहाँ कम्पनीहरू छन् सक्दैन र ती हाम्रो आदर्श ग्राहकहरु हुन्। हामी तिनीहरूलाई संसाधन, रणनीति र शिक्षा प्रदान गर्न सक्दछौं र तिनीहरूलाई भ break्ग गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। दुर्भाग्यवस, हामी पनि ती कम्पनीहरूसँग भेट्यौं जसले हुदैन। तिनीहरू हुदैन सुन्नुहोस्, उनीहरू हुदैन परिवर्तन गर्नुहोस्, तिनीहरू हुदैन आवश्यक संसाधनहरू लागू गर्नुहोस्, वा तिनीहरू हुदैन किनभने उनीहरूले सोच्छन् कि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाँहा छ।
We सक्दैन मद्दत कम्पनीहरु कि हुदैन.
टैग: व्यवसाय उपभोक्तालाईअन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक मिडियामार्केटिंग पुस्तकहरुमार्केटिंग खोज्नुहोस्uberflip हबभिडियो मार्केटिंग तथ्या .्क
T सल्लाहहरू मोबाईलको साथ तपाईंको व्यापार बढ्दै